AddEvent: ampidiro amin'ny serivisy kalandrie ho an'ny tranokala sy bilaogy | Martech Zone
Alarobia, Martsa 17, 2021 Alatsinainy, May 16, 2022 Douglas Karr
Indraindray dia matetika no asa tsotra indrindra izay mahatonga ny mpamorona tranonkala marary andoha be indrindra. Ny iray amin'izany dia ny tsotra Add ny kalandrie bokotra hitanao amin'ny tranonkala marobe izay miasa manerana ny fandaharana kalandrie fototra an-tserasera sy amin'ny alàlan'ny rindranasa birao.
Ao amin'ny fahendreny tsy manam-petra, ireo sehatra fanisan-tetiarana manan-danja indrindra dia tsy nifanaraka velively tamin'ny fizarana tsipiriany momba ny hetsika; vokatr'izany dia samy manana ny endriny avy ny kalandrie lehibe tsirairay. Apple sy Microsoft no nandray izany .ics fisie toy ny endrika… rakitra an-tsoratra tsotra misy ny antsipiriany ao anatiny. Google, amin'ny serivisy an-tserasera, dia mampiasa ny API anaovany fikirakirana ny mombamomba ny hetsika.
Inona ny endrika ICS
Ny Internet Calendaring sy ny fandaharam-potoana fandaharana fototra famaritana dia karazana haino aman-jery mamela ny mpampiasa hitahiry sy hanakalo ny kalandrie sy ny fandaharam-potoana fandaharana toy ny hetsika, to-dos, ny diary, ary ny vaovao / be atao vaovao. Ny fisie voaforona araky ny famaritana dia matetika manana extension .ics.
AddEvent dia serivisy kely tsara izay mamoaka kaody sy rakitra ilaina mba hanampy na hisoratra anarana amin'ny Apple Calendars, kalandrie Google an-tserasera, Outlook, Outlook.com, ary amin'ny Internet Yahoo! kalandrie. AddEvent dia manolotra fitaovana an-tserasera ary koa API hanamboarana ny rohy Add to Kalandrie sy ny bokotra araka izay tianao.
Ampidiro ireo safidy sy fitaovana AddEvent
Ampio amin'ny bokotra kalandrie (ho an'ny tranokala) - fomba haingana sy tsy misy ezaka amin'ny mpampiasa anao hanampiana ny hetsikao amin'ny kalandrie. Mora apetraka, tsy miankina amin'ny fiteny, faritra misy fotoana ary mifanaraka amin'ny DST. Miasa tanteraka amin'ny browser, tablette, ary fitaovana finday maoderina rehetra.
Kalandrie famandrihana (hetsika marobe) - ampio mora foana hetsika marobe amin'ny alimanakan'ny mpampiasa anao amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana amin'ny kalandrie noforoninao. Azonao atao koa ny manisy fanovana amin'ny kalandrie, ary izany fiovana izany dia hita taratra amin'ny alimanakan'ny mpamandrika rehetra.
Events (ho an'ny gazety sy fizarana ara-tsosialy) - ahafahan'ny mpampiasa manampy ny hetsikao ao amin'ny kalandrieny na aiza na aiza ianarany momba azy ireo - na gazety, media sosialy toy ny Facebook na Twitter, na fitaovana fanentanana toy ny MailChimp, Marketo, na Salesforce. Ny fitaovan'ny hetsika an'ny AddEvent dia mahatonga azy ho haingana sy tsy misy fanaintainana ho anao ny mamorona hetsika miaraka amin'ny pejy fipetrahany manokana izay azonao zaraina amin'ny media sosialy, na ampiasaina ho rohy amin'ny gazety sy fitaovana fanentanana.
Fomba URL mivantana (sy ny API) - rohy azo namboarina azo ampiasaina hamoronana hetsika eny an-dalambe, na handefasana ny mpampiasa anao amin'ny serivisy kalandrie ahafahan'izy ireo manampy ny hetsikao, na hametaka ny hetsikao amin'ny mailaka alefanao ho an'ny mpampiasa anao .
Sehatra kely matanjaka, tsotra ary ilaina izy io izay tena manampy ny mpisoratana anarana sy ireo mpiara-miasa aminao. Na manangana sehatra ianao ary mila fampandehanana fanampiny amin'ny kalandrie na raha orinasa fotsiny ianao mizara fampahatsiahivana hetsika ho an'ny rehetra, dia sehatra lehibe i AddEvent. Manolotra ihany koa izy ireo:
CalendarX - ny kalandrie azo idirana, ny kalandrie famandrihana ary ny serivisy fanangonana data rehetra dia lasa iray. Amin'ny maha kalandrie tafiditra azy dia mahatonga ny zava-mitranga ho sariaka amin'ny fahitan'ny mpampiasa anao amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo ny kalandrie tena izy hijerena ao amin'ny tranonkalanao. Amin'ny maha kalandrie famandrihana azy io, mamela ny mpampiasa anao hampiditra mora foana ny hetsikao amin'ny kalandrie ary hijanona ho vaovao hatrany amin'ny fanovana hetsika rehetra (mitovy amin'ny fitaovan'ny Kalandrie famandrihana, na dia misy safidy betsaka sy fanadihadiana lalindalina kokoa aza).
Analytics - Araho ny fampirantiana, hetsika-manampy, mpamandrika kalandrie, sy ny maro hafa. Ny Analytics dia manome angona sarobidy momba ny anao kalandrie sy hetsika noforonina tamin'ny alàlan'ny Dashboard na ny Kalandrie sy hetsika API.
Andramo AddEvent maimaim-poana
Tags: ampio amin'ny kalandrieampio amin'ny rohy kalandrieaddeventpaoma kalandriekalandrie APIfamandrihana kalandriekalandrie Xkalandrie tafiditrapejy fidinana hetsikarohy hetsikagoogle kalandriemailchimpmarketokalandrie any ivelanyfandaharana.com kalandriesalesforcekalandrie famandrihanakalandrie yahoo